सुनको भाउ फेरी बढ्यो, आज कतिमा हुदैछ कारोवार ? - ramechhapkhabar.com
सुनको भाउ फेरी बढ्यो, आज कतिमा हुदैछ कारोवार ?
बिहीबार सुनको भाउ बढेको छ । नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार बिहीबार सुनको भाउ ८०० रुपैयाँले बढेर प्रतितोला ९७ हजार ८०० रुपैयाँ कायम भएको छ । यसैगरी, तेजावी सुनको मूल्य तोलाको ९७ हजार ३०० रुपैयाँ निर्धारण भएको छ । यसअघि, बुधबार छापावाल सुन तोलाको ९७ हजार रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।
यसैगरी, तेजावी सुनको भाउ तोलाको ९६ हजार ५०० रुपैयाँ निर्धारण भएको थियो । यता, बुधबार चाँदीको भाउ पनि तोलामा ५ रुपैयाँले बढेर १२ सय ५० रुपैयाँ कायम भएको छ । बुधबार चाँदीको भाउ प्रतितोला १२ सय ४५ रुपैयाँ कायम रहेको थियो ।
यो पनि..युनिलिभर नेपालको आम्दानी घटेसँगै खुद नाफा घट्न पुग्यो, प्रतिशेयर आम्दानी कति ?
युनिलिभर नेपाल लिमिटेडको खुद नाफा घटेको छ । कम्पनीले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्मको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणले यस्तो देखाएको हो ।
विवरण अनुसार कम्पनीको खुद नाफा गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा घटेको हो । चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्ममा कम्पनीले २२ करोड ४ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ ।
यो गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ३१.४७ प्रतिशत कम हो । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिसम्ममा कम्पनीले ३२ करोड १६ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको थियो ।
कम्पनीको आम्दानी घटेसँगै खुद नाफा घट्न पुगेको हो । समीक्षा अवधिमा कम्पनीको बिक्री आम्दानी ४.९३ प्रतिशत घटेका छ भने कुल आम्दानी ३.५१ प्रतिशत घटेको छ । यता कम्पनीको बुल आम्दानी ६।७६ प्रतिशत बढेको छ। समीक्षा अवधिमा कम्पनीको जगेडा कोष २०.११ प्रतिशत बढेको छ ।
नाफासँगै कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दानी पनि घटेको छ । समीक्षा अवधिमा कम्पनीको यस्तो आम्दानी १४६ रुपैयाँ ५१ पैसा घटेर ३१९ रुपैयाँ ७ पैसामा झरेको छ । चैत मसान्तसम्ममा कम्पनीको प्रतिशेयर नेटवर्थ ३ हजार १८२ रुपैयाँ रहेको छ ।